I-3 IBM Training Course Wonke umntu kumashishini kufuneka asebenzise - ITS
IBM WebSphere ibhekisela kwi-brand yeprogram yeprogram ye-PC eklasini yeprogram enkulu yezoshishino eyaziwa ngokuthi "isicelo kunye nokuxuba i-middleware". Le micimbi yemveliso isetyenziswe ngabaxhasi bokugqibela ukwenza izicelo kunye nokufaka izicelo kunye nezicelo ezahlukeneyo. Kulo thunyelwe, Siza kuxoxa ngezinye zezona ziBalulekileyo zoQeqesho ze-IBM. Kutheni zibalulekile kuMgcini wakho? Ziziphi iinjongo zezo zifundo nokuba ngaba ufanelekile okanye akunjalo kwezo zifundo.
I-3 Iikhosi zoQeqesho eziBalulekileyo ze-IBM zikhankanywe ngezantsi:
Ukufakwa kunye noLawulo lwe-IBM WebSphere Portal 8 kwi-Windows
Ukufakwa kunye noLawulo lwe-IBM WebSphere Portal 8 kwi-Linux
IBM Sametime Ulawulo lwe-9.0
1. Ukufakwa kunye noLawulo lwe-IBM WebSphere Portal 8 kwi-Windows
2. Ukufakwa kunye noLawulo lwe-IBM WebSphere Portal 8 kwi-Linux
3. IBM Sametime Ulawulo lwe-9.0
I-IBM Training Course ijoliswe kubaphathi bekhompyutheni abafuna ukufumana okanye ukunyusa i-WebSphere Portal. Ngokusebenzisa izandla ekusetyenzisweni kokuzisa, ukuyila nokujongana neWebSphere Portal, i-framework chairmen iya kufunda ngokubaluleka ngeengcamango ezinqamlekileyo ze-WebSphere Portal ulawulo lwenhlangano Kwinqanaba elinqununu lekhosi, uhlaziya isiseko somsebenzi wemihla ngemihla kwi-IBM WebSphere Portal Server 8.0, kuquka ukusekwa kwe-portlet, ilungiselelo lokhuseleko, kunye ne-WebSphere Portal ukuphathwa kwephepha lewebhu. Kwesibili kwe-50% yekhosi, ukunyuswa kokugxininiswa ekumiseni nasekusetsheni kweWebSphere Portal V8.0.Ukubonakalisa idibanisa esebenzisiwe yiWebSphere Portal, ukubhaliswa kwabathengi bamanyeneyo, kunye nokuqokelela ukuxhatshazwa kunye nokulungelelaniswa nokungaphumeleli okungahambi. Le khosi ibhekiselele ngokukodwa kwiincandelo ezintsha ze-IBM WebSphere Portal 8.0:
Inkqubo entsha yokuseka, i-IBM Installation Manager
Iingxelo zoviwo zokugqithisa
Amaphepha agqityiweyo (ukudalwa kwekhasi elenziwe lula kwinqanaba lebar yamatye)
Isihloko esithuthukisiwe esisebenzisa isakhiwo esisodwa
Ukuphuculwa kokuphuculwa kombuzo (iphepha leetadata linikezelwa njenge-catchphrases kwi-HTML)
I-bolster ye-OpenID (Inika iindwendwe zendawo ukuba ziqinisekise ngokusebenzisa umthengisi womntu wangaphandle)
Wizard entsha yokwenza
Le yangaphakathi naphakathi kwendlela yeendlela yenza inzuzo kwi-chairmen yezikhokelo ezihlangeneyo ezitsha kwi-IBM® WebSphere® Portal nakwii-WebSphere Portal oonobhala bee-oviwo (phambi kweWS Portal 6.1) abafuna ukuphucula i-WebSphere Portal. Kule khosi, ulawulo olutsha lwe-WebSphere Portal Administration luza kuthatha ulawulo olubalulekileyo lwe-IBM WebSphere Portal, kunye neengcamango zePortal. Ukongezelela, i-WebSphere Portal ulawulo lwabalawuli abafuna ukuvuselela i-WebSphere Portal iinjongo zabo ziza kuthatha ngokukhawuleza ukuthatha inxaxheba ekuveliseni, ukuyila nokujongana neWebSphere Portal kwimisebenzi yemihla ngemihla.
Ukuqonda iWebSphere Application Server kunye neemeko zeJVM
Ukubandakanywa ngeemeko zeWebSphere Application Server kunye neJVM
Ufanele ube namandla okusebenzisa izixhobo, amandla, kunye neenkqubo ze-IBM WebSphere Portal 8.0 kwi:
Yongeza iipletlets kumaphepha esebenzisa entsha entsha yomqhubi wekhasi
Sebenzisa enye i-portlet
Misa iblogi kunye ne-wiki
Misela ukubhalisa kunye nokulinganisa
Yenza kwaye isebenzise imimiselo yokufumana izinto
Ukusebenza kunye nokusebenzisana kuxhasa
Buyisela okanye utshintshe ukungena
Sebenzisa iseti yesiko
Ukutshintshisa okulungiselelwe ukusebenzisa i-data kwiDesby database kwiDB2 Universal Database
Lungiselela iWebSphere Portal ukusebenzisa i-IBM Tivoli Directory Directory Server LDAP iseva
Yenza isetyenziso seNethwekhi yeNethiwekhi esine-hub bunch
Khetha ulungelelaniso olungcono kwiimfuno zombutho wakho
Vula ukungena nokulandela
Sebenzisa i-XML Ukufikelela ukulungelelanisa ukusetyenziswa kolawulo
Hambisa phantsi kwaye ubuyekeze ulwazi
Ukufeza iihones zokulawula ukukhutshwa
I-IBM Training Course ijoliswe kubaphathi bezikhokelo abafuna ukufumana okanye ukuhlaziywa kwakhona kwi-WebSphere Portal. Ukusebenzisa ngezandla ukusetyenziswa, ukuyila nokujongana neWebSphere Portal, iinqununu zesikhokelo ziya kufunda ngokubalulekayo ngeengcamango ezinqamlekileyo ze-WebSphere Portal ulawulo lwenhlangano Kwiqendu eliphambili lekhosi, uhlaziya imisebenzi eyenziwa yimihla ngemihla kwi-IBM WebSphere Portal Server 8.0, kuquka ukusekwa kwe-portlet, ilungiselelo lokhuseleko, kunye ne-WebSphere Portal iwebhusayithi yokulawula. Kwisibini ye-50% yekhosi, ukunyuswa kokugxininiswa ekumiseni nasekusekeni kweWebSphere Portal V8.0. Ulungelelwaniso luquka i-database esetyenziswa yiWebSphere Portal, ukubhaliswa kwabathengi abadibeneyo, kunye nokuqokelela ukulungelelanisa nokulungelelaniswa nokungaphumeleli okungekho.
Le khosi yezinga eliphakathi nangaphandle liyanceda abo bobabini abaphathi bekhompyutheni abanamava abasha kwi-IBM® WebSphere® Portal nakwiintloko ze-WebSphere Portal (i-WS Portal 6.1 ehamba phambili) abafuna ukuphucula i-WebSphere Portal. Kule khosi, ulawulo olutsha lwesikhokelo kwi-WebSphere Portal Administration luza kuthatha ulawulo lokubaluleka oluphambili lokukhuthaza ukukhutshwa kwe-IBM WebSphere Portal, kunye neengcamango zePortal. Ukongezelela, i-Web-Sphere Portal ulawulo lwabaveleli abafuna ukuvuselela i-WebSphere Portal inxaxheba yamanyathelo baya kuthatha ngokukhawuleza ukubandakanyeka ekuveliseni, ekuhleleni nasekujongeni iWebSphere Portal kwimisebenzi yemihla ngemihla.
Ufanele ube namandla okusebenzisa izixhobo, amandla, kunye nobuchule be-IBM WebSphere Portal 8.0:
Yongeza iipletlets kumaphepha esebenzisa entsha enembile yomqhubi wekhasi
Ukusebenza kunye nokusebenzisana kunondla
Tweak okanye utshintshe indlela yokungena
Le khosi yoQeqesho lwe-IBM ikukhokela ngokucwangcisa nokulawula i-IBM Sametime 9.0. Ikwajonganisa nokuxilwa kwengxaki.
Le khosi ikulawula ngendlela eya kuthunyelwa nokulawula i-IBM Sametime 9.0. Ukongezelela ukuhlanganisa uphando olubalulekileyo.
Akukho nkcazelo yokwenza i-Sametime iyadingeka, kodwa kufuneka uqondisise iinkqubo ezibalulekileyo zolawulo kunye nokusetyenziswa kweprogram.
Qalisa ii-Sametime ze-9.0 izigqeba zamaziko (ngaphandle kwe-Edge, iikhampani zevidiyo ezivakalayo okanye ukuxhaswa kwamakhasimende ahlukeneyo)
Vumela ukusekwa kwechanekileyo kweeSametime ze-9.0
Qala, yeka, kwaye uqalise kwakhona yonke indawo yeSametime 9.0
Sebenzisa ii-Sametime ze-9.0 zixhobo eziphawulekayo